Bariis la dubay oo la dubay iyo kalluun monk | Bezzia
Maria vazquez | | baastada
Guryo badan oo ku yaal juqraafigayada, bariisku wuxuu noqdaa jilaa dhamaadka usbuuca. In kasta oo aan soo bandhigno cunto karintan Talaadada, waxay sidoo kale ahayd dhammaadka wiigga markii aan isku daynay oo aan siinay suulka. Waana taas bariis la dubay oo toon duban ah iyo kalluun suufi ah waa wax lagu farxo.
Ha ka baqin in bariiska uu ku dhamaado foornada ama in waxyaabaha uu ka kooban yahay ay ka mid yihiin toonta duban ama baradhada. Wax walba way shaqeeyaan waxayna siinayaa bariiskan mid ka duwan nuances of dhadhanka iyo textures. Ku dhiiran inaad tijaabiso! Kuma niyad jabin doono!
Waxay ku qaadan doontaa ilaa iyo inta ay ku qaadanayso inaad diyaariso paellas kale iyo suxuunta bariiska ee u baahan maraqa. Shaqada kaliya ee dheeraadka ah ayaa halkan joogi doonta dubay madaxa toonta. Laakiin waxaad samayn kartaa maalin ka hor, adigoo ka faa'iideysanaya xaqiiqda ah inaad foornada u shideyso diyaargarow kasta oo kale oo ku hay qaboojiyaha.
1 madaxa toonta
1 basal cas, duqadda
2 leeks, duqeeyey
1 basbaas dawan oo cagaaran, shiidan
1/2 qaado yar oo qashir basbaas chorizo
1/2 galaas oo yaanyo la jajabiyey
2 qaado qaado yaanyo
1/2 qaado oo ah paprika
1 baradho dhexdhexaad ah, oo ku jira xabadaha yaryar
1 koob oo bariis ah
4 koob oo maraq kalluun ah
3 dabo monkfish oo barafaysan (la dhalaalay)
Dubi madaxa toonta. Si arrintan loo sameeyo, gooyay madaxa sare ee madaxa, si aad u aragto gudaha gudaha toon. Madaxa toonta dul saar foornada aluminiumka, ku dar qanjaruufo milix ah iyo daad saliid ah. Dabadeed madaxa toonta ku duub sidii baakidh yar, si aanay saliiddu u soo bixin inta ay karsanayso, una qaad foornada. Dubo at 180ºC at joog dhexdhexaad ah ilaa 30 daqiiqo ama ilaa aad taabto xagga sare oo aad ogaato inay mar hore jilicsan yihiin.
Marka madaxa toonta la dubayo, ka fur, si yar u qabooji, ka dibna ka saar toonta nadiifka ah, adigoo riixaya meesha hoose si ay u soo baxaan. Ku kaydi heerkulka qolka haddii aad hadhow isticmaali doonto. Haddii kale, ku rid weel hawo leh, ku dabool saliid saytuun oo ku rid qaboojiyaha.
Kadib diyaari sofrito. Ku rid saddex qaado oo saliid ah digsi oo shiil basasha, caleenta iyo basbaaska ilaa ay ka yareeyaan midabkooda.
Ka dibna ku dar toonta ceeriin iyo afar ama shan xabo oo toon ah oo la dubay oo shiil laba daqiiqo oo kale.
Ku dar yaanyada digsiga, saxarka basbaaska chorizo ​​​​iyo paprika. Isku qas oo kari dhowr daqiiqo si ay tamaandhadu u lumiso qayb ka mid ah biyaheeda.
Kadib ku dar baradhada iyo bariiska oo isku kari ilaa dhowr daqiiqo ka hor intaadan ku darin 3 koob oo kalluunka karsan.
Xilliga, isku dar oo u ogolow in ay kariyo dhowr 10 daqiiqo ka badan kulayl dhexdhexaad ah.
Kadib dhig dabo suufi la jarjaray iyo milix iyo basbaas bariiska oo ku dar maraq badan haddii uu qallalay.
Qaado digsiga foornada oo ku kari 10-12 daqiiqo oo kale 250ºC. Daawo oo haddii aad aragto in uu bilaabay inuu qallalo, dul saar foornada aluminiumka si aanay u lumin dareere badan.
Ka dib markii wakhtigu dhaafo, ka saar foornada foornada oo u ogolow bariiska la dubay ee toon duban iyo kalluunka monkfish uu nasto dhowr daqiiqo ka hor inta aanad bixin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Recipes » baastada » Bariis la dubay oo toon duban lagu dubay iyo kalluun monk